HOME – Heybad Media -Tv/Radio/Web
WAR-02/06/2022-Turkey- Madaxweynaha Turkiga Erdogan, ayaa amar ku bixiyey in la badalo sida dunidu iminka u qorto magaca wadankiisa, loona qoro sida taariikhiga ah ee dalkaasi magaciisa loo qoro ama loona qori jiray. Arrintaan oo baarlamaanka Turkigu ansixiyey, ayaa hadda wixii ka dambeeya wuxuu noqonayaa qorista magaca wadanku, Turkiya, halkii uu […]
WAR 23/06/2022 Khamiis: Verus-ka keena xanuunka dabeysha (Poliomyelitis) ayaa laga dhex helay dhuumaha qaada biyaha ee dalkan UK. Ka dib markii la arkay in ay soo badanayaan, caruurta yar-yar ee xanuunku ku dhacayo, iyadoo horeyna looga cirib-tiray wadanka, ayaa baaritaan la sameeyey lagu ogaaday, in xanuunku uu soo noqonayo. Polio […]
WAR-22/06/2022-Arbaco-UK: Waxaa aad u kordhaya sicirka UK oo tagay meel aad u sareysa. 9.1% ayuu kor u kacay sicir-bararku taasoo ka dhigtay nolosha dadka caadiga ah, mid aad i adag. Dowlada ayaa indha oo dhami wada eegayaan, iyaduna waxeey sheegtay in ay adeegsaneyso, wax kasta oo karaan keeda ah, oo […]
WAR-22/06/2022-Arbaco-UK: Iyadoo lagu jiro xilliga Imtixaanaadka ee ardayda dalkaan UK, ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafiyey, imtixaanka maadada Kimistariga ee dugsiyada sare ‘GCSE’ oo iib ah. Laba maalmood ka hor uun beey ahayd, markii ay soo baxeen warar sheegaya in imtixaanaadka A-levelka ee laga qaado caruurta collage-ka ka gudbeysa una […]
WAR-22/06/2022-Arbaco: Warbixin uu daabacay The Guardian ayaa lagu sheegay in sarkaal u hadlay Qaramada Midoobey uu sheegay, in abaaraha Soomaaliya ka jira wax looga qaban karo, gargaar aad iyo aad u ballaran oo misna aan lala raagin. Wakiilka ayaa intaa ku daray in ay arkayaan caruur u geeriyooneysa dacdarro, gaajo […]
(WAR)13/05/2022-Dubai UAE-Waxaa goor dhow geeriyooday, madaxweynihii dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, Sheekh Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan. Sheekh Khalifa oo ahaa 73-jir, waxaa geeridiisa shaaca ka qaaday, madaxtooyada UAE, waxeeyna ku dhawaaqeen, 40 maalmood oo loo baroor-diiqayo geerida madaxweynaha, calanka wadankana hoos loo dajinayo, halka shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkadaha gaarka loo […]
(WAR) Sabti 16/04/2022: Jamciyadda Quruumaha ka Dhaxeeysa ayaa si cad u sheegtay, in heshiiska dhex maray dowladaha UK iyo Ruwanda, uu yahay mid sharci-darro ku ah, heshiiska qaxootiga ee dunidu wada gaadhay. Todobaadkaan ayeey Priti Patel, xooghayaha arrimaha gudaha ee UK, heshiis la saxiixday dalka Ruwanda, kaasoo dhigaya in dadka […]
(WAR)-20/03/2022-Axad-UK-Ra’iisulwasaaraha Britian Boris Johnson, ayaa dhaleeceyn badan wajahaya, ka dib markii uu is bar-bar dhigay, dadka reer Ukreyn oo daggalladu ku dul socdaan iyo dadka reer Britian ee u codeeyey in UK ka baxdo Midowga Yurub. Khudbad uu jeediyey ayuu ku sheegay in Biritish-ku yihiin sidii Yukreyniyiinta oo kale, oo […]
1st of March, 2021-(AP)- Nicolas Sarkozy ayaa dacwad lagu qaaday lagu helay, in uu musuq ku kacay intii uu xilka haayey, waxaana maxkamad dalkaasi ku taala ku xukuntay xabsi. Sarkozy oo dalka Faransiiska madaxweyne ka ahaa, intii u dhaxeysay sanadkii 2007-dii ilaa iyo 2012-kii ayaa lagu helay in uu xaakin […]